उच्च शिक्षाको लागि आइएल्ट्स अनिवार्य भए पनि अंग्रेजी भाषा पढ्ने भिषा (एलिकोस)को लागि भने आइएल्ट्स दिइराख्नुपर्ने कुनै जरूरत छैन । एलिकोसमा भर्ना गरेर तपाईंले स्टुडेन्ट भिषाको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
मेरो स्टुडेन्ट भिषा सकिन अझै दुई महिना बाँकी हुनुपर्ने हो । भिषा थप्नको लागि अनलाइन आवेदन दिन खोजेको थिएँ तर सिस्टमले लिँदै लिएन । अध्यागमन विभागमा फोन गरेको त मेरो भिषा तीन महिना अगाडि नै रद्द भइसकेको छ रे ! अब मसँग के विकल्प रहन्छ ?
तपाईं अध्यागमन विभागको कम्प्लायन्स सेक्सनमा सम्पर्क गर्न जानुहोस् र के कारणले भिषा रद्द भएको रहेछ, त्यो बुझ्नुहोस् । भिषा रद्द हुने प्रमुख कारण भनेको तपाईंको शैक्षिक संस्थाले जारी गरेको सेक्सन २० सूचना हो । यदि तपाईंको भिषा माइग्रेशन ऐनको सेक्सन १३७ ‘जे’ अन्तर्गत रद्द भएको हो भने तपाईंले सोही ऐनको १३७ ‘के’अनुसार उक्त भिषा रद्द गर्ने निर्णय हटाउनको निम्ति तुरुन्त निवेदन दिन सक्नुहुन्छ । यस प्रकृयामा तपाईंलाई रजिष्टर्ड माइग्रेशन एजेन्टले सहयोग गर्न सक्छन् ।